MOETHIHAAUNG: ဆရာတော် ဦးထွန်းရှိန်အတွက် ကျောင်းမြေအသစ် ဝယ်ယူရန်
ဆရာတော် ဦးထွန်းရှိန်အတွက် ကျောင်းမြေအသစ် ဝယ်ယူရန်
ခန့်မှန်းခြေမြေတန်ဘိုး။ ။ သိန်း ၄၀ မှ သိန်း ၅၀။
ဝယ်ယူမည့်နေရာ။ ။ မြိတ် မြို့နယ် ကျောက်ဖျာရွာအနီး။
ဝယ်ယူရခြင်းအကြောင်း။ ။ လက်ရှိ ဆရာတော်သီတင်းသုံးနေသော ကျောင်းမြေသည်။ သဒ္ဓါတရားရှိသော မြေပိုင်ရှင် တဦးမှ ဆရာတော်အား ကျောင်းဆောက်နေထိုင်ခွင့်ပြုထား မြေဖြစ်သည်။ ၄င်းကျောင်းမြေပါဝင်မြေများကို ထိုမြေပိုင်ရှင်ထံမှ ခရိုနီ သူဋ္ဌေးတဦးမှ ဝယ်ယူသွားပြီး ဆရာတော်အား ထိုနေရာတွင် ဆက်လက် သီတင်းသုံးခွင့်မပြုတော့သဖြင့် ကျောင်းကို ရွေ့ပြောင်းရန် မြေနေရာ အမြန်လိုအပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၄င်းအပြင် ဆရာတော်သည် ကျောင်းမြေဝယ်ယူပြီး၍ ကျောင်းကို ပြောင်းရွေ့ ဆောက်ပြီးပါက။ ဆရာတော်ရွာမှ ရွာသူရွာသားများ အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးတက်ကြွယ်ဝလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ စာကြည့်တိုက်နှင့် ကွန်ပြူတာ သင်တန်းများကို ဆောက်လုပ် လုပ်ဆောင်လိုသည့် အာသီသရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ဆရာတော် ၏ စိတ်ကူးစေတနာများ အောင်မြင်ထမြောက်စေရန် ဆရာတော်၏ မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်း နှင့် သဒ္ဓါ တရားထက်သန်သော ဥပသကာ များမှ နိဗ္ဗာန်၏အကျိုးကို မျှော်ကိုးရည်သန်၍ နဲများမဆို ပါဝင်လှူဒါန်းကြပါလို့ နှိုးဆော်လိုက်ပါသည် သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့။
ဆက်သွယ်လှူဒါန်းရန်။ ။ဦးဓမ္မိက (မြိတ်) ဗမာပြည်။ ၆/မမန(သ)၀၀၁၁ရ၅ (6/MaMaNa(Tha) 001175)
အီးမေး။ ။ Land4VTShein@Gmail.com
Accoung Name Tin Win Aung
Account Number 480177904 (Saving)
Bank National Australian Bank.
After making deposit please send an Email to Land4VTShein@gmail.com. And make L4VTS at your Deposit.
Posted by Myo Lwin Aung at 5:50 AM